Sina 330kV fitoerana tokana Y-type tower transmission transmission sy factory | XY Tower
XY Group dia orinasa manana tantara lava. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, ny orinasa lehibe indrindra dia ny varotra karazana fitaovana elektrika sy telecom toy ny tariby elektrika sy tariby 、 mpanova 、 fantsom-pifandraisana 、 switch kabinetra tower tilikambo sns sns Teo anelanelan'ny taona 2001 sy ny taona 2008 dia nanome izahay karazana fitaovana ho an'ny mpanjifa an-jatony manerana ny firenena. Nandritra ny vanim-potoana dia nanomboka nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa ny XY Group noho ny vokatra tsara sy ny serivisy asa. Ny traikefa momba ny varotra dia mitondra vondrona XY vondrona famatsiana matanjaka kokoa noho ny mpifaninana aminay.
Tamin'ny taona 2008, natsangana ny XY Tower izay nifantoka tamin'ny famokarana tilikambo vy. XY Tower dia nahazo tombony tamin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny mpanjifa sy ny fantsom-pamokarana matanjaka ao amin'ny Vondrona, ny fampandrosoana ny XY Tower dia haingana tato ho ato. Amin'izao fotoana izao, XY Tower dia manome tilikambo vy maherin'ny 1000 isan-taona. Ny mpanjifa dia mandrakotra faritany 20 any Chine sy tsena ivelany. XY Tower no mpamatsy mahay ny vondrona Global 500 maro dia misy ny fantsom-panjakana g fehikibo atsimo Group Vondrona injenieran'ny angovo China 、 Telecom China 、 Huawei sns. Raha toa ka ampiharina amin'ny fanjakana mpikambana ny vokatray
Previous: 330kV tilikambo avo roa heny tilikambo Y-type
Manaraka: 132kV tilikambo boribory tokana
Fampitana sy fizarana
Andalana herinaratra fampitana